Ny Ombalahibemaso Andrianampoinimerina - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
’Andrianampoinimerina nosoratan’i mompera Antoine de Padoue Rahajarizafy, pretra zezoita teraka tamin’ny 1911, no votoatin’ny boky « Ny Ombalahibemaso », navoakan’ny Ambozontany Analamahitsy Antananarivo tamin’iny volana okitobra 2018 iny, araka ny fanirian’ny olona maro. Boky misy pejy 452 miaraka amin’ny fonony, mirefy 21,1 x 13,8 sm. Tantara nosoratan’ny mpanoratra tamin’ny vanim-potoanan’ny fanjanahan-tany, ary navoaka tamin’ny 1954 raha ny hita amin’ny fanamarihana ny famoaham-pirinty azy. Boky kely dimy efa nivoaka tamin’izany fotoana izany no natambatra ho iray amin’ity boky ity. Anisan’ny loharano nanovozan-kevitra nanoratan’i mompera Rahajarizafy azy ny Tantaran’ny Andriana nosoratan’ny R.P. Callet, pretra zezoita frantsay tonga tao Antananarivo tamin’ny taona 1864.
Anaram-bositra niantsoana an’Andrianampoinimerina ny Ombalahibemaso, mpanjaka nanana ny maha izy azy tamin’ny fotoan’androny (1787-1810). Tsy lefy laza mandraka ankehitriny. Fa Ramboasalama no anarany tamin’ny fahazazany. Ranavalonandriambelomasina, zanak’Andriambelomasina no reniny, ary Andriamiaramanjaka avy ao Kaloy no rainy. Nalaza tamin’ny fanorenana miandalana ny fanjakana teto Madagasikara noho ny toetra amam-panahy feno fahendrena nananany teo amin’ny fitarihany olona sy fifampitondrana teo amin’ny fiarahamonina izy. Hain’i mompera Rahajarizafy tsara ny nanasongadina izany ao amin’ny boky. Raha mandre izany anarana Andrianampoinimerina izany dia zavatra maromaro no mby ao an-tsaina, ka anisan’ireny ny hoe « Ny ranomasina no valam-parihiko », enti-milaza ny maha iray an’ity Nosy ity, efa hatramin’izany fotoana izany. Mazava ao anatin’ny boky ny nahatonga io fisainan’ny Ombalahibemaso io. Niainga tamin’ny famoriana an’Imerina Andrianampoinimerina, anarana midika hoe « ampoin’Imerina, ampovoan’Imerina », fa nitatra tamin’ny fanjakana hafa manerana ny Nosy izany. Hita taratra amin’ity asa soratra ity, izay niainga tamin’ny tahirin-kevitra maro ny zotram-piainan’Andrianampoinimerina, manana ny toetra tokoa hitondra ny tany sy ny fanjakana, na dia tsy izy aza no tokony ho teo raha ny fandovam-panjakana tamin’ny fotoan’androny no jerena. Mila mpitondra mahay ny vahoaka, nahatonga ny fanesorana an’Andrianjaka. Niavian’ny teny malaza nambaran’Andriambelomasina hoe « Lasany ny tany sy ny fanjakana ». Ary nahazoany tso-drano tamin-dRamorabe nenitoany izany. Ny toetrany hatramin’ny fahazazany no nandrafitra sy nanamafy ny maha mpitarika azy. Olona mahay mihary, niainga tamin’ny papelika, nandalo tamin’ny akoho sy ondry, ary tonga hatramin’ny omby. Antra olona sy tsy manaiky ny tsy rariny. Olona tsy mba te hivoky amin’ny ranomason’olona. Olon’ny fampihavanana sy firaisan-kina. Olona te hanasoa vahoaka. Olona mino sy matahotra an’Andriamanitra.
Mahaliana ny famakiana ny boky, manampy amin’ny famantarana ny tantaran’i Madagasikara sy ny mponina ao aminy. Azo isainana ny fifampitondrana eo amin’ny mpiara-belona mandraka ankehitriny, indrindra eo amin’ny toetra amam-pihetsika eo amin’ny mpitondra sy tompon’andraikitra isan-tokony. Toa mandrorona ihany ny firenena raha ny zava-misy ankehitriny raha mitaha amin’ny foto-pisainana nananan’Andrianampoinimerina. Efa tamin’ny vanim-potoanany izy no nanome toky hoe « tsy mba hitiavako vady amam-janaka ity tany ity, tsy mba hitiavako olon-tiana : na iza na iza tiako, raha homana ny vahoaka ka maka ny zavatra tsy foinareo, dia matiko », enti-milaza fa ny fitondrana ny tany sy ny fanjakana tsy hananan-kavana. Mipetraka tsara ny rafitra rehetra ifampitondrana eo amin’ny fiarahamonina hiadanan’ny ambanilanitra, araka ny fanirian’Andrianampoinimerina. Mahazo ny anjarany ny olona rehetra eo amin’ny fihariana ataony, ary faizina izay mandika lalàna. Hevitra ankapobeny amin’ny boky ireo nambara ireo, handrisika antsika hamaky manontolo azy, hanakarantsika ny foto-pisainan’ny Ombalahibemaso. Boky mahaliana natao ho an’ny olona rehetra, indrindra ny mpianatra. Koa indramintsika ny tenin’ny Filohan’ny Akademia Malagasy Raymond Ranjeva ao amin’ny famaranana ny Savaranonando amin’ny boky hoe : « Koa raiso sy ampahafantaro amin’ny havana ka taomy ny rehetra handray, hivoy ary hifampizara fa mamy sy soa no ho raisinao ».
Fa eto am-pamaranana koa dia omena ireo lohahevitra isaky ny boky :
• Boky I : “Lasany ny tany sy ny fanjakana !”- Ny niandohany sy ny maha-mpanjaka azy.
• Boky II : “Ombalahy tsy roa am-pahitra”- Ny nahavoriany ny ankibon’Imerina.
• Boky III : “Ny ranomasina no valam-parihiko !”- Ny niantsoany ireo foko manodidina.
• Boky IV : “Ny nametrahan’Andriamanitra ny andriana tokana, dia ny hiadanan’ny vahoaka !”- Fampitomboan-karena sy lalàm-panjakana.
• Boky V : “Hody any an-danitra aho, fa alain’Andriamanitra !”- Ny Ombalahibemaso sy ny vahoakany.